Tag: chigadzirwa kushambadzira | Martech Zone
Tag: chigadzirwa kushambadzira
Vamwe venyu vanogona kutenderedza maziso avo pane izvi, asi kekutanga nguva pandakaona zvinoshamisa chigadzirwa kurongedza ndipo pakaita shamwari yakanaka paakatenga AppleTV kwandiri. Yaive yekutanga Apple chishandiso chandati ndambogamuchira uye chiitiko chingangodaro chakanditungamira kune gumi nemaviri zvigadzirwa zveApple zvandinazvo izvozvi. Chimwe chezviitiko zvinoshamisa zveunboxing yaive yangu yekutanga MacBook Pro. Bhokisi rakanga rakanyatso kukwana uye iyo MacBook
Maitiro Ekugadzirwa Kwekupakata Kunokanganisa Chiitiko cheMutengi
Chitatu, Ndira 18, 2017 Douglas Karr
Zuva randakatenga rangu rekutanga MacBook Pro raive rakakosha. Ndinoyeuka ndichinzwa kuti bhokisi rakavakwa zvakadii, maraputopu akanyatsoratidzwa sei, iko kweye accessories… zvese zvakagadzirirwa chiitiko chakakosha kwazvo. Ini ndinoramba ndichifunga kuti Apple ine zvimwe zveakanakisa zvigadzirwa kurongedza vagadziri pamusika. Nguva dzese pandinoburitsa chero zvigadzirwa zvavo, chiitiko. Muchokwadi, zvakanyanya zvekuti
Ichi chiitiko chinonakidza uye chinonakidza kubva kuna Frank Dale, CEO weCompendium. Ini ndinonyatso kuziva makambani mashoma uko kushambadzira kunowanda mushandisi ruzivo uye masevhisi icho chigadzirwa chinopa. Muchokwadi, ini ndanyatsokumbira kuratidzira kusatombovhura iwo manyorerwo avo, pachinzvimbo kushanda pasuru inopenya uye inopenya. Iyo haisiyo nyaya kana chigadzirwa chako chakashambadzirwa, asi ini ndakachiona chichipaza mamwe makambani kana kushambadzira kuri